August 5, 2020 1996
केहि दिन अगाडि विस्कुट’को कार्टुन’मा फेला परेकी बालिका आमा पहिलो पटक सार्वज’निक भएकी छन् । आफुले जन्मदि”एको बच्चालाई आफुले त्यसरी सडकमा नफालेको बताएकी छन् ।
उनले आफुले बच्चा स्वी”कार गर्न सक्ने अवस्था नभएका कारण अरुलाई जिम्मा दिनु’पर्ने अवस्था भ’एकाले पु’ष्पा अधिकारीलाई संरक्षणमा दिएको बताएकी छन् । विदेशवाट आउँदा उनी गर्भवती अव’स्थामा थिइन् । उनले शिक्षण अस्पतालमा जन्मदिएकी हुन् ।
परिवारका सदस्यलाई आफु ग_र्भवती भएको थाहा नभएका कारण उनले बच्चा आ”फुले पाल्न सकिनन् । स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो नभएका कारण आफुले बच्चा हुर्काउन नसक्ने भए’काले बालगृहकी संस्थापक पुष्पालाई जिम्मा दिएकी थिइन् ।
काठमाडौं । केहि दिन अगाडि वि_स्कुटको कार्टुनमा फेला परेकी बालिका आमा पहिलो पटक सार्व’जनिक भएकी छन् । आफुले जन्मदिएको बच्चा”लाई आफुले त्यसरी सडकमा नफा_लेको बताएकी छन् ।
उनले आफुले बच्चा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नभएका कारण अरुलाई जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था भएका’ले पुष्पा अधिकारी_लाई संरक्षणमा दिएको बताएकी छन् । विदेश’वाट आउँदा उनी गर्भवती अवस्थामा थिइन् । उनले शिक्षण अस्पतालमा जन्मदिएकी हुन् ।
परिवारका सदस्य’लाई आफु गर्भवती भएको ‘थाहा नभएका कारण उनले बच्चा आफुले पाल्न सकिनन् । स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो नभएका कारण आफुले बच्चा हुर्काउन न_सक्ने भएकाले बालगृहकी संस्थापक पुष्पालाई जिम्मा दिएकी थिइन् ।
उनले भनिन् म निकै ‘अस्वास्थ्य छु । समय स’मयमा रगत चढाउनु पर्छ त्यसैले उपचार गरिरहेकी छु । स्वस्थ्य भएपछि बच्चा लैजाउँला भनेर बालश्रममा रा’ख्न दिएको हो । उनले विदे’शवाट आए’पछि एउटा सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा बसेकी थिइन् ।
उनले आफु विदेश’वाट आएपछि तत्काल घर जान नसकेको बताइन् । अहिले भने उनले आ_फै बच्चा जिम्मा लिए’की छन् । मैले मेरो नानी जिवित फेला पारे त्यही खुसी छु अब कसरी हुर्काउने त्यसका बारेमा सोच्दैछु । त्यसरी खेल खेल्नेहरुलाई त अब दिन्न ।
आफै अरुको सहारा’मा बस्नु पर्ने अव’स्था भएका कारण बच्चालाई आश्रममा दिनुपर्ने बाध्यता भएको बताइन् । तर त्यस्तो गर्लान भन्ने मलाई लागेको थिएन । उन’ले बच्चा आश्रम’मा दिँदा राम्रो ब्यक्ति आयो भने जिम्मा दिनुहोला भनेर दिएको पनि बताइन् ।
बालिकाको आइतवार न्वारन स’मेत गरिएको छ । तर त्यो घ टनाको भित्रि पाटो सार्व’जनिक भएपछि युट्युवर न्यौ’पाने पुगेका थिए । शिशु वेवारिसे फेला परेको भन्दै बालगृहकी संस्थापक पुष्पा अधिकारीले संरक्षणको जिम्मा लि’एकी थिइन् । उनको’ बालगृहमा पुगेका दर्जनौ युट्युवरले भिडियो बनाएका थिए । त्यस पछि देशविदे’शवाट सहयोगको ओइरो आउन थाल्यो ।
शिशु भेटिएको सातौं’ दिनमा अन्तत नयाँ रहस्य खुलेको छ । शिशुलाई पैसा कमाउनका लागि त्यसरी जानाजा’न राखिएको रहस्य खुलेको छ। उनी केही ‘समय अघि वैदेशिक रोज’गारीमा रहेर अलपत्र परेकाहरुलाई चार्टर विमानवाट उद्दार गरिएकी महिला हुन् ।
उनी गर्भवती अवस्था’मा नेपाल आएकी थि’इन् । उनले बच्चालाई जन्म दिइन् । काठमाडौंको कुनै संस्था’मा बसेकी ति महिलाको परिचय गोप्य राखिएको छ । उनी माक्स लगाएर भि’डियोमा सार्वजनिक भएकी छन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो अन्तर्वार्ता …. यहाँ थिचेर भिडियो हेर्नुहोस्
Prevश्रीमतीले मुद्धा हालेपछि बच्चा बोकेर घरतिर लागे अर्जुन (भिडियो सहित)
Nextपुष्पा अधिकारीले संचालन गरेको केयर बालगृहका ११ बालिकाको उद्धार
संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड, आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? हेर्नु`होस्
गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गित ‘ नमस्कार ‘ भयो भाइरल (भिडियो सहित)